Cilmi-baaris caddeyneysa dhibaatada hurda-la'aanta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cilmi-baaris caddeyneysa dhibaatada hurda-la'aanta
Publicerat torsdag 18 april 2013 kl 11.38
Dadka uu culays xagga maskaxda uga yimaado shaqooyinka ay qabtaan, ama shaqeeya saacado kala geddisan waxay khatar ugu sugan yihiin in ay ka hurdo-xumaadaan dadka kale. Sidaas waxaa lagu muujiyey qoraal ku saabsan cilmi-baaris oo ay maanta soo bandhigtay hay’adda diyaarinta qiimeynta caafimaadka.
- Dhibatooyinka ka jira kara goobaha shaqada waxaa ka mid ah culayska maanka, shuruudo adag oo lagu xiro, goobta shaqada oo lagu dhibo iyo weliba dadaalka waxqabadka qofka iyo abaalmarinta oo aan isu dheellitirnayn. Waxyaalahaas oo dhan ayaa lala xiriiriyaa carqaladaha hurdada oo soo kordhayey. Sidaasna waxaa sheegay caalinka Steven Linton oo guddoomiye ah mashruucaan cilmi-baarista.
Hay’adda diyaarinta qiimeynta caafimaadka oo af-iswiidhishka loogu soo gaabiyo SBU waxay daraasad ku samaysay in ku dhow 8 000 oo ah cilmi-baarisyo caalami ah oo ku saabsan hurdada iyo shaqada. Waxaana daraasadda lagu sheegay in dhibaatooyinka hurda-xumidu ay yaraadaan kolka ay goobta shaqada ka jirto xiriirka wanaagsan oo dadka ku abuura in ay iscaawinaan, oo ka taliyaan xaaladdooda shaqada, hab caddaalad ahina halkaas ka jiro. Haddiise aysan arrimaha jirin waxaa kordha halista hurda-xumida.
Marka aan si wanaagsan loo seexan waxay saamayn ku yeelan kartaa xaaladda nolosha qofka oo waaga dambe u keeni karta cudur. Dadka shaqeeya wakhtiyada kala duwan ayey ku badan tahay in hurdada khalkhal ka galo, laakiin haddii qofkaasi uu joojiyo shaqaynta saacadaha kala duwan waxaa kolkaas wanaagsanaada seexashadiisa, waa sida warbixinta daraasadda lagu sheegay.
Steven Linton wuxuu rajeynayaa in waxtarka lagu muujiyey cilmi-baarista ee goobaha shaqada oo wanaagsan ay seexashada dadku ka sii wanaagsanaato.